Akụkọ - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Afọ Ndị Mbụ
Ntọala na 1993 site na itinye ego nke RMB 300,000, mpaghara ụlọ ọrụ ahụ bụ 5,000 square mita, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ bụ 32 rotary cutting poplar veneer is the main product. Ntughari kwa afọ dị gburugburu RMB 3,000,000
Afọ Ndị Ga-etolite
Na 1997, Xuzhou Home World Wood Co., Ltd. hiwere site na itinye ego nke RMB8,000,000, na-ekpuchi square mita 33,000 na ịnwe karịa ndị ọrụ 200. N'ime afọ a, ikike mmepụta tinyere ihe nkiri chere ihu na plywood, plywood azụmahịa.
N’afọ 2008, etinyere RMB 20,000,000 iji mepee ụlọ ọrụ ahụ na mita 50, 000. Onu ogugu ndi oru were rue 500. N'oge a, anyị na-enye kwa afọ 10, 000 cubic mita fancy plywood na 30,000 cubic mita ọzọ plywood. Ntughari kwa afọ na-ebili RMB 160,000,000
Site na itinye ego nke yuan 120, e hiwere otu ụwa ụwa, nke kpuchiri square mita 133,000. Kwa afọ na -emepụta ihe nkiri 250,000 cubic mita ihu plywood, 23,000 cubic mita fancy plywood, 100,000 cubic mita ihe nkiri chere ihu plywood na 5,000 cubic mita ndị ọzọ pụrụ iche plywood. Uru a na-ewepụta kwa afọ ruru RMB 4,000,000,000.
2011 - Taa
Ihe karịrị afọ iri abụọ na mmepe, ugbu a senso nwere ụlọ ọrụ 9 nwere ụlọ ọrụ niile.
OMLỌ GRWA GROUP SUBSIDIARIES
- ROC mba ahia Co., Ltd. - Mbupụ & Mbubata azụmahịa, Nhazi Plywood na Nnyocha
- Zhengquan osisi Co., Ltd. - Nrụpụta plywood onye na-emepụta ihe
- Zhanpeng osisi Co., Ltd. - Nrụpụta plywood onye na-emepụta ihe
- Lifeng osisi ụlọ ọrụ Co., Ltd. - Azụmahịa plywood onye na-emepụta ihe
- Tongshun Wood Co., Ltd. - Na-emepụta ihe plywood
- Zengyin Wood Co., Ltd. - LVL scaffolding plank, onye na-emepụta ọkụ LVL
- FANS Ngwá ụlọ Co., Ltd. - Ngwunye ngwa ngwa